Republishing the article : From Burma to Southport: Finding your way in an unfamiliar world - Chalkbeat Indiana
<h1>From Burma to Southport: Finding your way in an unfamiliar world</h1> <p>Shaina Cavazos, Chalkbeat Indiana</p> <time>Apr 21, 6:01am EDT</time> <p>It never occurred to Elly Mawi that there were places whereaplastic card guaranteed you unlimited access to books.</p> <p>For the two years she spent inaMalaysian refugee camp, school meantadirt floor without desks or chairs. She fled there from Burma,acountry wracked with civil war, after her father and grandmother were killed inacar accident. They had gone for medical care, which wasn’t available in their village.</p> <p>Not until she arrived in New Bern, N.C., did Mawi discover libraries. A caseworker took Mawi and her sister, Htayni Sui, to get library cards.</p> <p>“She told me I can borrow all the books I see for free,” Mawi said. “I could not believe it.”</p> <p>At Southport High School, where 19-year-old Mawi will graduate third in her class, efforts to educate immigrant students have gone far beyond the academic skills they’ll need to graduate.</p> <p>The school has also changed much about the way it operates to give children learning to speak English the tools they need to navigate their new worlds.</p> <p>Books, in particular, made the difference for Mawi in learning English.</p> <p>“If I were to measure me from my past to my present, and hopefully to the future, it’s amazing how far I have come,” she said. “All this is only possible firstly because of God, and then my mom and sister, but then because of my school.”</p> <p>As difficult as Mawi’s journey sounds, many of her Southport classmates have traveled roads not so different.</p> <p> Data source: Indiana Department of Education <br> Credits: Sarah Glen/Chalkbeat Since 2001, more than 2,000 refugees have enrolled in Perry Township schools. Most arrive with little knowledge of English, and many emigrate from Burma.</p> <p>This year, almost 22 percent of Southport’s students are still learning English. Most are Chin,aBurmese ethnic minority, who are increasingly drawn by the school district’s reputation for serving them well.</p> <p>That’sapoint of pride for Principal Barbara Brouwer, but it’s beenadifficult road that has irrevocably changed Southport.</p> <p>“Once they enter, their clock starts as far as they have four years to graduate from high school,” Brouwer said.</p> <p><strong>A wake up call</strong>The blaring fire alarm on an otherwise regular school day at Southport was notascheduled drill.</p> <p>Students and teachers poured out onto the building’s grounds. But there wasn’tafire. No, they hadaprankster, Brouwer figured.</p> <p>On the security tape wasagirl casually walking through the hallway, dragging her fingertips absentmindedly along the textured cinderblock wall. When they landed onafire alarm jutting out of the wall, her fingers gripped and pulled it.</p> <p>She kept walking. Forafew seconds, nothing happened. Then sirens started shrieking.</p> <p>Brouwer sent two police officers and the assistant principal to pull the girl from gym class. The girl was confused, but she knew she was in trouble. Only when she burst into tears did Brouwer realize what had happened.</p> <p>The girl was Chin. She had no idea whatafire alarm was.</p> <figure><img src="https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19839954/seriespromo.jpg"></figure><p>“We went, ‘Oh my goodness, we didn’t teach them,’” Brouwer said.</p> <p>A school’s job goes beyond teaching children academic subjects. They also have to graduate ready to maneuver through the world they will live in. With the Burmese children, Brouwer realized, Southport was failing on that front.</p> <p>“There’s still things that we learn every single day,” Brouwer said. “We’ve got to communicate and teach them what the rules are for school. This is OK, this is not OK.”</p> <p>Since then, Southport has overhauled everything from orientation to the school to class schedules to better serve English language learners.</p> <p>For example, immigrant students now often start in classes that are easier to manage withoutastrong grasp of English, such as gym, art and keyboarding. Classes that require lots of textbook reading, like biology or history, can come later.</p> <p>Southport also developed “sheltered” English classes. They still incorporate all of Indiana’s English standards, but they use different readings that are easier for English language learners to understand.</p> <p>It took time to find the best strategies.</p> <p>“We made some mistakes, and we learned from those mistakes and have adapted,” Brouwer said. “But that’s the really good thing about it. When you havealot of people providing input, you can see where you made mistakes. … We grew as much as they did.”</p> <p><strong>Coming to America</strong>When Mawi was about 13, her mother had enough of the turmoil. It was time to leave Burma.</p> <p>Her mother held the family together working long hours, but it had takenatoll. Plus, the political situation in the Chin section of the country was not getting better.</p> <p>“There are no human rights in my country, and especiallyalot of people get persecuted for religious reasons,” she said.</p> <p>In 2008,aUnited Nations refugee agency helped the family escape to Malaysia.</p> <p>Mawi discovered she loved to read while living in the refugee camp. Occasionally, she had an English lesson. It was Mawi’s first exposure to the language, and she tried to read as much as she could to prepare for her family’s upcoming trip to the United States.</p> <p>In 2010, they made it.</p> <p>But school in North Carolina was difficult. Mawi didn’t know English well enough to understand how to advocate for herself. A counselor advised her againstaharder math class because language learners had struggled with it in the past.</p> <p>Things got better when they moved to Indiana.</p> <p>Mawi’s English had improved, and she tested well enough to be in regular classes rather than those for English language learners. Finally, that meant she could enroll in the honors and Advanced Placement classes she was clamoring for.</p> <p>“You don’t know sometimes without letting them try first how good they are,” Mawi said of kids like her who were new to English. “So they said, ‘You can give itatry first, and afteramonth you can drop it.’ So I was given those kinds of chances.”</p> <figure><img src="https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19844766/inidc5_6k310dgwfao7y7x037s_original.jpg"><span>Robert Scheer</span><figcaption>Barbara Brouwer (middle), principal at Southport High School, congratulates Emily Sung (left) and fellow Burmese student Elly Mawi. They are both recipients ofaLilly Endowment Community Scholarship.</figcaption></figure><p><strong>A bright future</strong>“Gifted Hands,” by Benjamin Carson, was the first nonfiction book Mawi finished on her own. It’s still her favorite.</p> <p>It’s the story of Carson’s life, from growing up from poor in Detroit to becoming the director of pediatric neurosurgery at Johns Hopkins Hospital at age 33.</p> <p>Mawi had to use English, Chin and Burmese dictionaries to make it to the end.</p> <p>“I had to doalot of flipping after I readapage,” she said. “I had to flip my dictionary 10 times. It took me forever to finishabook.”</p> <p>In Carson’s story, Mawi saw the poverty and pain of her own childhood andadream that matched her own: findingaway to use learning to help herself and others.</p> <p>Mawi is trying to decide between pursuing math or medicine in college. Math would be easier, but medicine might be the way she could help people most.</p> <p>If only her country had more doctors, she’s thought, her father and grandmother might not have had to risk the long trip to another city that cost them their lives.</p> <p>“I feel like education is the most powerful weapon that I have that I can use to make change in my community for my people and for others,” Mawi said.</p> <p>Life in Perry Township schools has been much better than her life in Burma, Malaysia and North Carolina, she said. Now, she has school friends, church friends andastrong community connection.</p> <p>Mawi recently was talking withafriend, who is also Chin but now goes to college at Butler, when their conversation turned toward the future. The friend said she wanted to live in Perry Township as an adult so her kids could go to Southport High School, too.</p> <p>Mawi agreed. She’s convinced something special is going on at her high school compared to the experiences of friends elsewhere.</p> <p>“It’s not quite the same,” Mawi said. “We feel special here.”</p> <p>Powered by <a href="http://www.typeform.com/?utm_campaign=typeform_HSWswZ&amp;utm_source=website&amp;utm_medium=typeform&amp;utm_content=typeform-embedded&amp;utm_term=English">Typeform</a><em>Thanks to </em><a href="http://luna360.com/"><em>LUNA</em></a><em> for providing the translation for this series.</em><br></p> <figure><img src="https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19839960/luna.jpg"></figure><p><strong>Desde Birmania hasta Southport: encontrando el camino en un mundo desconocido</strong><em>Elly Mawi encontró apoyo y aceptación – en el Municipio de Perry – que nunca había encontrado antes</em>Nunca se le ocurrióaElly Mawi que había lugares en donde una tarjeta de plástico te garantizaba acceso ilimitadoalibros.</p> <p>Los dos años que ella pasó en un campamento de refugio en Malasia, la escuela significaba un piso sucio, sin mesas ni sillas. Ella voló para allá desde Birmania, un país sacudido por guerra civil, después de que su padre y abuela fallecieran en un accidente automovilístico. Habían ido para recibir atención médica, la cual no estaba disponible en su pueblo.</p> <p>Hasta que llegóaNew Bern, Carolina del Norte, fue que Mawi descubrió las bibliotecas. Una trabajadora social llevóaMawi yasu hermana, Htayni Sui,aque obtuvieran una tarjeta de biblioteca.</p> <p>“Ella me dijo que puedo pedir prestados todos los libros que veo, gratis. No lo podía creer,” dijo Mawi.</p> <p>En la Preparatoria Southport, donde la chica Mawi de 19 años se graduará siendo la tercera en su clase, los esfuerzos para educaralos estudiantes inmigrantes han ido mucho más allá que las habilidades académicas que necesitaran para graduarse. La escuela también ha cambiado mucho acerca de la forma en que opera para darlesaniños aprendiendo inglés las herramientas necesarias para navegar sus nuevos mundos.</p> <p>Los libros, en particular, hicieron la diferencia para Mawi en aprender inglés.</p> <p>“Si me midiera de mi pasadoami presente, y talvezami futuro, es increíble que tan lejos he llegado, todo esto solo es posible primero que nada por Dios, y después por mi mama y hermana, pero después por mi escuela.”</p> <p>Tan difícil como suena el trayecto de Mawi, muchos de sus compañeros de clase de Southport han viajado por caminos no tan diferentes.<br>Desde el 2001, más de 2,000 refugiados se han inscrito en las escuelas del Municipio de Perry. La mayoría llegaron con muy poco entendimiento al inglés, y muchos emigraron de Birmania.</p> <p>Este año, casi el 22 por ciento de los estudiantes de Southport aún siguen aprendiendo inglés. La mayoría son Chin, una minoría étnica de Birmania, que son atraídos cada vez más por la reputación del distrito escolar por servirles bien.</p> <p>Ese es un punto de orgullo para la Directora Barbara Brouwer, pero ha sido un camino difícil que cambiado irrevocablementeaSouthport.</p> <p>“Una vez que entran, su reloj comienza ya que tiene cuatro años para graduarse de la preparatoria,” dijo Brouwer.</p> <p><strong>Una llamada de atención</strong>La alarma de fuegoatodo volumen en un día regular de clases en Southport no era un simulacro. Los estudiantes y maestros salieronalas afueras de la escuela. Pero no había un fuego. No, había un bromista, Brouwer pensó.</p> <p>En los tapes de seguridad estaba una chica caminando casualmente por el pasillo, distraídamente arrastrando sus dedos al contorno del bordo de la pared. Cuando sus dedos llegaronala alarma de incendios sobresaliendo de la pared, la agarró y la jaló.</p> <p>Ella siguió caminando. Por unos segundos, nada sucedió. Después, las sirenas empezaronapitar.</p> <p>Brouwer envióados oficiales de policía y el subdirectorasacarala chica de la clase de gimnasia. La chica estaba confundida, pero sabía que estaba en problemas. Hasta cuando se echóallorar, Brouwer se dio cuenta de lo que había sucedido.</p> <p>La chica era Chin. Ella no tenía idea de lo que era una alarma de incendios.</p> <p>“Dijimos, ‘Oh mi Dios, no les enseñamos,’” dijo Brouwer.</p> <p>El trabajo de una escuela va más allá de enseñaralos niños las materias académicas. También tienen que graduarse listos para maniobraratravés del mundo que vanavivir. Con los niños birmanos, Brouwer se dio cuenta, la escuela Southport estaba fallando en ese frente.</p> <p>“Todavía hay cosas que aprendemos todos los días”, dijo Brouwer. “Tenemos que comunicar y enseñarles cuáles son las reglas para la escuela. Esto está bien, esto no está bien”.</p> <p>Desde entonces, Southport ha revisado todo, desde la orientaciónala escuela hasta los horarios de clase, para servir mejoralos estudiantes del idioma inglés.</p> <p>Por ejemplo, los estudiantes inmigrantes ahora comienzan,amenudo, en las clases que son más fáciles de manejar sin un buen conocimiento de inglés, como el gimnasio, el arte y el teclado (piano). Las clases que requieren mucha lectura de libros de texto, como la biología o historia, pueden venir más tarde.<br>Southport también desarrolló clases de inglés “protegidos”. Todavía incorporan todos los estándares de inglés de Indiana, pero utilizan diferentes lecturas que son más fáciles de entender para los estudiantes del idioma inglés.</p> <p>Tomó tiempo encontrar las mejores estrategias.</p> <p>“Cometimos algunos errores, y hemos aprendido de esos errores y nos hemos adaptado”, dijo Brouwer. “Pero eso es lo realmente bueno de esto. Cuando usted tiene un montón de gente que proporciona su punto de vista, se puede ver donde se cometió errores. … Hemos crecido tanto como ellos lo hicieron”.</p> <p><strong>VeniraAmérica</strong>Cuando Mawi tenía como 13 años, su madre ya estaba harta de<br>L tumulto. Era hora de irse de Birmania.</p> <p>Su madre mantuvoasu familia trabajando horas largas, pero había hecho un daño. Además, la situación política en la sección Chin del país no estaba mejorando.</p> <p>“No hay derechos humanos en mi país, y especialmente muchas personas son perseguidos por razones religiosas,” ella dijo.</p> <p>En el 2008, una agencia de refugiados de las Naciones Unidas ayudóala familiaaescapar de Malasia.</p> <p>Mawi descubrió que le encantaba leer mientras vivía en el campo de refugiados. De vez en cuando, ella tenía una lección de inglés. Fue la primera exposición de Mawiala lengua, que ella trató de leer lo más que pudo para prepararse para el próximo viajealos Estados Unidos de su familia.</p> <p>En el 2010, lo lograron.</p> <p>Pero la escuela en Carolina del Norte fue difícil. Mawi no sabía Inglés lo suficientemente bien como para entender cómo abogar por sí misma. Un consejero le aconsejó el no tomar una clase de matemáticas más difícil ya que estudiantes del idioma habían tenido problemas en el pasado.</p> <p>Las cosas mejoraron cuando se mudaronaIndiana.</p> <p>El inglés de Mawi mejoró, y sacó buenas calificaciones en clases regulares mejor que en clases para aprendices del idioma. Finalmente, eso quiso decir que se podía inscribir en las clases de honor y clases de Colocación Avanzada que tanto quería tomar.</p> <p>“Muchas veces no sabes que tan buenos sean si no los dejas intentar,” dijo Mawi acerca de chicos como ella que eran nuevos al inglés. “Ellos dices, ‘inténtalo primero, y después de un mes lo puedes dejar.’ A mí me dieron ese tipo de oportunidades.”</p> <p><strong>Un futuro brillante</strong>“Manos Superdotadas,” por Benjamín Carson, fue el primero libro no-ficción que Mawi terminó por si sola. Aún sigue siendo su favorito.</p> <p>Es la historia de la vida de Carson, desde como creció pobre en Detroit hasta convertirse en el director de neurocirugía pediátrica del Hospital Johns Hopkinsala edad de 33.</p> <p>Mawi tuvo que usar diccionarios de inglés, Chin y Birmano para poder terminarlo.</p> <p>Tuve que cambiar páginas después de que leía, tenía que cambiar de página en mi diccionario 10 veces. Me tomó mucho tiempo para poder terminar un libro,” ella dijo.</p> <p>En la historia de Carson, Mawi vio la pobreza y el dolor de su propia infancia y un sueño que hacía juego con su propio: encontrar una manera de utilizar el aprendizaje para ayudarseasí misma yaotros.</p> <p>Mawi está tratando de decidir entre perseguir las matemáticas o la medicina en la universidad. Las matemáticas serían más fácil, pero la medicina podría ser la forma en que podría ayudar másaotras personas.</p> <p>Si sólo su país tuviera más médicos, ella pensó, su padre y su abuela no hubiera tenido que arriesgarse al largo viajeaotra ciudad que les costó la vida.</p> <p>“Siento que la educación es el arma más poderosa que tengo que puedo usar para hacer un cambio en mi comunidad para mi gente y para los demás”, dijo Mawi.</p> <p>La vida en las escuelas del municipio de Perry ha sido mucho mejor que su vida en Birmania, Malasia y Carolina del Norte, dijo. Ahora, ella tiene amigos en la escuela, amigos en la iglesia y una fuerte conexión con la comunidad.</p> <p>Mawi recientemente estaba hablando con una amiga, que también es Chin pero ahora vaala universidad en Butler, cuando la conversación giró hacia el futuro. La amiga dijo que quería vivir en el municipio de Perry cuando fuera adulto para que sus hijos pudieran irala Preparatoria Southport, también.</p> <p>Mawi estuvo de acuerdo. Está convencida de algo especial que está pasando en su escuela secundaria en comparación con las experiencias de amigos en otros lugares.</p> <p>“No es lo mismo”, dijo Mawi. “Nos sentimos especial aquí.”</p> <p><strong>မြန်မာနိုင်ငံမှဆောက်ပို့ Southport သို့၊ မရင်းနီးသောကမ္ဘာထဲမှာလမ်းစရှာခြင်း</strong><em>အီလိုင် မွေး </em><em><strong>Elly Mawi</strong></em><em> က ဆောက်ပို့နှင့်ဖယ်ရီမြိ့အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေမှ လက်ခံကြိုဆိုမှုကို အရင်ဘယ်တုန်းကမှသူမကြုံခဲ့ဘူးပါ</em>အီလိုင်မွေး <strong>Elly Mawi</strong> အတွက် စာအုပ်များကိုကန့်သတ်ချက်မရှိယူသုံးနိုင်ရန် ပလပ်စတစ်ကဒ်ပြားကအာမခံချက်အဖြစ် အသုံးပြုတာကို ဘယ်နေရာမှာမှတွေ့မယ်လို့သူမထင်ခဲ့ဘူး။မလေးရှားနိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းမှာနှစ်နှစ်နေခဲ့သည့်ကာလတွင် စာသင်ကျောင်းဆိုတာ စားပွဲထိုင်ခုံမရှိသောမြေအခင်းကိုဆိုပါသည်။ မတော်တဆယဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး သူ့အဖေနှင့်အဖွားဆုံးသွားသည့်နောက်ပိုင်း ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်ပျက်စီးနေသောမြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးပြီး အဲဒီနေရာကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူတို့က ဆေးကုရန်သွားကြသော်လည်း သူ့တို့ရွာမှာဆေးကုရန်ဘာမှမရှိပါ။</p> <p>မွေးက နယူးဘန်းမြို့ မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်သို့ရောက်လာပြီးမှ စာကြည့်တိုက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူနှင့်သူ့အမဌေးနီစွီးတို့ ကို သူတို့ကိစ္စကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သူကိစ်ဝါကါတယောက်က စာကြည့်တိုက်ကဒ်ပြားသွားယူရန်ခေါ်သွားခဲ့သည်။</p> <p>“သူကစာအုပ်အားလုံးအခမဲ့ငှါးဖတ်လို့ရတယ်လို့ကျမကိုပြောတယ်” ဟု မွေးကဆိုပါသည်။ “ကျမမယုံနိုင်သလောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။”</p> <p>ဆောက်ပို့အထက်တန်းကျောင်းမှာ၊ ဒီ ၁၉ နှစ်အရွယ်မွေးက တတိယအဆင့်ဖြင့်ကျောင်းအောင်သွားမည့်နေရာမှာ၊ ရွှေ့ပြောင်းဝင် ရောက်နေထိုင်သူကျောင်းသူကျောင်းသားများကို ကြိုးစားပြီးပညာသင်ပေးရာမှာ သူတို့ကျောင်းအောင်ရန်စာပေအတတ်ပညာ သာမက အများကြီးဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ စာသင်ကျောင်းလည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အင်္ဂလိပ်စကားသင်နေသောကလေး များ၏ကမ္ဘာသစ်မှာလမ်းစရှာဖွေသွားလာရန် လိုအပ်သည့်အရာများကိုဆောင်ရွက်ပေးသည်။</p> <p>အထူးသဖြင့် စာအုပ်များသည် မွေးအတွက်အင်္ဂလိပ်စာသင်ရာတွင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။</p> <p>“ကျမကိုယ်ကျမအတိတ်ကနေလက်ရှိ၊ အနာဂတ်ပါအပါ ပြန်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျမဘယ်လောက်ခရီးရောက်နေပြီလဲဆို တာအံ့အားစရာပါပဲ” ဟု သူပြောပြပါသည်။ “ဒါတွေအားလုံးက ပထမအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်၊ ပြီးတော့ကျမရဲ့ အမေနဲ့အမတို့၊ နောက်ပြီး ကျမရဲ့ကျောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာ။”</p> <p>မွေး၏ခရီးစဉ်ခက်ခဲသလို၊ ဆောက်ပို့ကျောင်းမှာ သူနှင့်အတူကျောင်းတက်ဖေါ်အတော်များများက ကျော်ဖြတ်သွားသည့်လမ်းများ သိပ်မကွာကြပါ။</p> <p>၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစပြီး ဖယ်ရီမြို့ဒေသစာသင်ကျောင်းများမှာ ဒုက္ခသည်အယောက်ပေါင်း ၂၀၀၀ ထက်ကျောင်းအမည်စာရင်းသွင်းထား သည်။ အများအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာအနည်းငယ်သာတတ်ပြီး အတော်များများက မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာလာကြသည်။</p> <p>ဒီနှစ်မှာ ဆောက်ပို့ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး အင်္ဂလိပ်စာသင်နေကြသည်။ အများသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူအနည်းစုတစုဖြစ်သောချင်းလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးဒေသက သူတို့ကိုကောင်းကောင်းအကျိုးဆောင် ရွက်ပေးသည်ဟုနာမည်ကောင်းရရှိသည့်အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိပါသည်။</p> <p>အဲဒီနေရာဟာ ကျောင်းအုပ် ဘားဘရာ ဘရိုးဝါ Barbara Brouwer အတွက်ဂုဏ်ယူစရာနေရာဖြစ်သည်၊ သို့သော် ခက်ခဲ သည့်ခရီးတခုဖြစ်ပြီးစောက်ပို့ကိုအတည်တကျပြောင်းလဲခဲ့စေသည်။</p> <p>“သူတို့ဝင်ရောက်တာနဲ့ အထက်တန်းကျောင်းအောင်ဘို့လေးနှစ်အကြာလောက်ကတည်းက သူတို့၏ချိန်ကိုက်နာရီအလုပ်စလုပ် နေပြီး” ဟု ဘရိုးဝါကပြောပါသည်။</p> <p><strong>သတိပေးသံ</strong>ကျောင်းပုံမှန်တက်သည့်နေ့တနေ့မှာ မီးသတိပေးသံကျယ်လောက်စွာမြည်နေတာ ဆောက်ပို့ကျောင်းမှာရက်ချိန်းစီစဉ်သည့်လေ့ကျင့် မှုမဟုတ်ပါ။ ကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့်ဆရာဆရာမများသည် ကျောင်းအဆောက်အအုံအပြင်ဘက်မြေပြင်ပေါ်မှာ ထွက်သွား ကြသည်။ သို့သော် မီးလောင်တာမတွေ့ရပါ။ မဟုတ်သေးဘူး၊ တယောက်ယောက်ကနောက်ပြောင်ကျီစယ်တာဖြစ်မည်ဟု ဘရိုးဝါ ထင်ပါသည်။</p> <p>လုံခြုံရေးတိတ်ခွေမှာ ကလေးမတယောက်က ကျောင်းတွင်းလူသွားလမ်းမှာရိုးရိုးလေးလမ်းလျှောက်ရင်း သူ့လက်ချောင်းများကိုသတိ မထားပဲအုပ်နံရံပေါ်မှာဆွဲသွားသည်။ နံရံပေါ်ရှိကျွန်ထွက်နေသာမီးသတိပေးခလှုပ်နှင့်ထိသည့်အခါမှာ သူ့လက်ချောက်များချိတ်မိပြီး ခလှုပ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားသည်။</p> <p>သူလမ်းဆက်လျှောက်သည်။ သုံးလေးစက်ကန့်အကြာမှာ ဘာမှမဖြစ်သေးပါ။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမီးသတိပေးချက်ရုတ်တရက်စပြီး ကျယ်လောင်စွာအော်ဟစ်ပါတော့သည်။</p> <p>ဘရိုးဝါက လုံထိန်းရဲနှစ်ယောက်နှင့်လက်ထောက်ကျောင်းအုပ်ကိုပို့လိုက်ပြီး ထိုကလေးမကို အားကစားအတန်းမှခေါ်ထုတ်ခိုင်းလိုက် သည်။ ကလေးမကဇဝေဇဝါဖြစ်သွားသည်။ သို့သော်ပြသနာတခုခုဖြစ်နေပြီးဆိုတာသူသိပါသည်။ သူစပြီးမျက်ရည်ကျသည့်အခါမှ ဘရိုးဝါက ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာသိသွားသည်။</p> <p>ကလေးမက ချင်းလူမျိုးဖြစ်ပါသည်။ မီးသတိပေးစက်ဆိုတာသူဘာမှမသိပါ။</p> <p>“ကျမတို့က၊ ‘ဘုရားရေ၊ သူတို့ကိုမသင်ပေးရသေးဘူး’လို့ အဲလိုဖြစ်သွားတယ်” ဟုဘရိုးဝါကပြောပါသည်။</p> <p>စာသင်ကျောင်း၏အလုပ်က ကလေးများ၏ကျောင်းဘာသာရပ်များထက်ပိုပြီးလုပ်ရပါသည်။ သူတို့နေထိုင်မည့်ကမ္ဘာထဲမှာလမ်းစရှာ သွားလာနိုင်ရန်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး ကျာင်းအောင်ရန်လည်းလိုပါသည်။ မြန်မာကလေးများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဲဒီနေရာမှာ ဆောက်ပို့ကရှုံးနိမ့်နေသည်ဟု ဘရိုးဝါသတိပြုမိသည်။</p> <p>“နေ့တိုင်းလိုလိုကျမတို့သင်ခန်းစာယူစရာရှိနေသေးတယ်” ဟု ဘရိုးဝါကပြောပါသည်။ “သူတို့နှင့်ဆက်သွယ်စကားပြောပြီး ကျောင်းအတွက်ဘာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိလဲဆိုတာ ဒါရတယ်၊ ဒါမရဘူး၊ သင်ပေးရတယ်။”</p> <p>အဲဒီကတည်းကစပြီး၊ ဆောက်ပို့ကျောင်းက ကြိုဆိုမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အတန်းအချိန်ဇယားကအစ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူသူ များအတွက်ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်အောင် အားလုံးလိုလိုပြောင်းလဲခဲ့ရသည်။</p> <p>ဥပမာ ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သူကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် သူတို့စယူမည့်အတန်းများဟာ နည်းနည်းလွယ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာများများသင်စရာမလိုအပ်သည့် ဥပမာ အားကစား၊ အနုပညာ၊ စာနှိပ်စာရိုက် စသည့်အတန်းများဖြစ်ကြသည်။ ဇီ၀ဗေ ဒသို့မဟုတ်သမိုင်းလိုစာများများဖတ်ရန်လိုအပ်သည့်အတန်းများကို နောက်မှယူရပါသည်။</p> <p>ဆောက်ပို့အနေဖြင့် “အကာအကွယ်ပေး”အင်္ဂလိပ်စာအတန်းများစီစဉ်ပေးသည်။ အင်ဒီယားနားပြည်နယ်၏အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်ရှိ သည်၊ သို့သော် အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအတွက်ဖတ်ရလွယ်မည့်စာအုပ်မျိုးအသုံးပြုသည်။</p> <p>အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အချိန်ကြာပါသည်။</p> <p>“ကျမတို့က အမှားအချို့လုပ်ခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့အဲဒီအမှားတွေထဲမှသင်ခန်းစာယူပြီးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲမှုလုပ်တယ်” ဟု ဘရိုးဝါ ကပြောပါသည်။ “ဒါမေမဲ့ အဲဒါကတမျိုးကောင်းပါတယ်။ လူအတော်များများမှကျိုးစားဆောင်ရွက်သည့်အချိန်မှာ ဘယ်နေရာမှာ အမှားလုပ်ခဲ့လဲဆိုတတွေရမယ်၊ သူတို့ကြီးပြင်းလာသလိုလိုကျမတို့လည်းရင့်ကျက်လာခဲ့တယ်။”</p> <p><strong>အမေရိကိုလာရခြင်း</strong>မွေးအသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာ သူ့အမေက၀ရုံန်းသုံးကားအခြေအနေမျိုးစုံနှင့်တွေ့ကြုံခဲ့ရတာကြာပြီး။ မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာရန် အချိန်တန်ပါပြီး။</p> <p>သူ့အမေက မိသားစုတစုတစည်းထဲထားရန်အတွက် အလုပ်အချိန်ကြာကြာပိုလုပ်သည်။ သို့သော်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် ချင်းလူမျိုးဘက်ပိုင်းကနိုင်ငံရေးအခြေအနေလည်း မကောင်းလာပါဘူး။</p> <p>“ကျမတို့နိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာမရှိဘူး။ ပြီးတော့ အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးကိစ္စကြောင့် လူအတော်များများက နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းမှုခံရတယ်” ဟုသူပြောပြပါသည်။</p> <p>၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့က မိသားစုများကို မလေးရှားနိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးရန်ကူညီပေးခဲ့ သည်။</p> <p>မွေးကဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာနေသည့်အချိန်မှာ စာဖတ်ခြင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်တာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တခါတရံအင်္ဂလိပ်စာသင်ရသည်။ မွေးအတွက်အဲဒီဘာသာစကားနှင့်ပထမဆုံးတခါထိတွေ့မှုဖြစ်သည့်အတွက် သူ့မိသားစုအမေရိကကိုသွားရန်ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် တတ်နိုင်သလောက်စာဖတ်ခဲ့သည်။</p> <p>၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ သူတို့ရောက်လာသည်။</p> <p>သို့သော် မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားမှာရှိသောစာသင်ကျောင်းကခက်ခဲသည်။ မွေးက သူ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ရန်အင်္ဂလိပ် စကားသိပ်နားမလည်သေးပါ။ ကျောင်းအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်က လွန်ခဲ့သည့်အချိန်မှာဘာသာစကားသင်ရသူအတွက်ခက်ခဲလို့ သူ့ကို ပိုခက်ခဲသည့်သင်္ချာအတန်းမယူရန်အကြံပေးခဲ့သည်။</p> <p>အင်ဒီယားနားပြည်နယ်သို့ပြောင်းလာသည့်အခါ အခြေအနေပိုကောင်းလာပါသည်။</p> <p>မွေး၏အင်္ဂလိပ်စာပိုကောင်းလာပြီး အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများတက်သည့်အတန်းမှာတက်မည့်အစား သူ့စာမေးပွဲရလဒ်အရ ပုံမှန်အ တန်းများမှာတက်လို့ရပြီး။ နောက်ဆုံးမှာ သူတက်ချင်လှသည့်ဂုဏ်ထူးနှင့်အဆင့်မြင့်အတန်းများမှာသူတက်ရန်စာရင်းသွင်းလို့ရပြီး။</p> <p>“သူတို့ကိုမလုပ်ကြည့်ခိုင်းပဲသူတို့ဘယ်လောက်တော်လဲဆိုတာသူတို့တခါတရံမသိရပါ” ဟု မွေးက အင်္ဂလိပ်စာသင်နေသည့် ကလေးများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြောပါသည်။ “သူတို့ပြောပြတယ် ‘ပထမစမ်းယူကြည့်ပါ၊ ပြီးတော့ တလနောက်ပိုင်းမှာရပ်လိုက်လို့ရ တယ်’ အဲလိုအခွင့်အရေးမျိုးကိုကျမလဲရရှိခဲ့ပါတယ်။”</p> <p><strong>အနာဂါတ်ကောင်း</strong>ဘင်းဂျမင် ကာရ်စန် <strong>Benjamin Carson</strong> ရေးထားသည့် “အစွမ်းအစရှိသောလက်များ” ဆိုသည့်စိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်မဟုတ် သောစာအုပ်ကို သူကိုယ်တိုင်အပြီးဖတ်ခဲ့သည့်ပထမစာအုပ်တအုပ်ဖြစ်သည်။ သူ့အတွက်အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်ဖြစ်နေသေးသည်။</p> <p>အဲဒါဟာ ကာရ်စန်၏ဘ၀အကြောင်းဖြစ်သည်၊ ဒီထရွိုင်းမြို့မှာဆင်းရဲစွာကြီးပြင်းလာရသည့်အကြောင်းမှစပြီး အသက် ၃၃နှစ်အရွယ်၌ ဂျွန်ဟော့ဖ်ခင်ဆေးရုံမှာ ကလေးသူငယ်အထူးကုဦးနှောက်အာရုံကြောဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသမှုညွန်ကြားရေးမှူး ဖြစ်လာသည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။</p> <p>စာအဆုံးထိဖတ်ရန်အတွက် မွေးက အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ၊ ချင်း ဘာသာစကားအဘိဓာန်များကိုအသုံးပြုခဲ့ရသည်။</p> <p>“ကျမစာတမျက်နှာဖတ်ပြီးရင် စာရွက်တွေတော်တော်လေးလှန်ရတယ်” ဟု သူပြောသည်။ “အဘိဓာန်ကို ၁၀ ခါလောက်လှန်ရ တယ်၊ စာအုပ်တအုပ်ပြီးဘို့အတွက်တော်တော်ကြာတယ်။”</p> <p>ကာရ်စန်၏အကြောင်းထဲမှာ၊ မွေးအတွက် သူငယ်ရွယ်စဉ်က ဆင်းရဲမှု နာကျင်မှုနှင့်သူ့အိပ်မက်များ နှင့်ထပ်တူဖြစ်သည့်အိပ်မက်များ ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်၊ သင်ကြားမှုကိုအသုံးပြုရန်လမ်းရှာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများကို ကူညီရန်အတွက်ဖြစ်သည်။</p> <p>မွေးအနေဖြင့် တက္ကသိုလ်မှာသင်္ချာဘာသာသို့မဟုတ်ဆေးဘာသာရပ်နှစ်ခုထဲကတခုရွေးရန်ဆုံးဖြတ်နေသည်။ သင်္ချာကပိုလွယ်မည်၊ သို့သော်ဆေးဘာသာရပ်ကအခြားသူများကိုအများဆုံးကူညီလို့ရမည်။</p> <p>သူ့နိုင်ငံမှာ ဆရာဝန်ပိုရှိခဲ့မည်ဆိုလျှင် အခြားမြို့သို့ခရီးဝေးသွားပြီး သူ့အဖေနှင့်အဖွားအသက်ဆုံးရှုံးရလောက်သည့်အထိ အန္တရယ် မရှိခဲ့ဘူးဟုသူစဉ်းစားခဲ့သည်။</p> <p>“ကျမအတွက်ပညာရေးဆိုတာ ကျမမှာရှိတဲ့အင်အားအကြီးဆုံးလက်နက်ဖြစ်ပြီး ကျမလူစုအသိုင်းအဝိုင်း ကျမလူမျိုးနှင့်အခြားသူ များအတွက် သုံးလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု မွေးကပြောပါသည်။</p> <p>မြန်မာနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်မှာထက် ဖယ်ရီမြို့ဒေသရှိကျောင်းများမှာ နေရတာပိုကောင်းသည်ဟု သူပြောပြခဲ့သည်။ အခုမှာ စာသင်ကျောင်းကသူငယ်ချင်း၊ ဘုရားကျောင်းကသူငယ်ချင်းနှင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်သန်မာသောဆက် နွယ်မှုများရှိပြီး။</p> <p>မကြာသေးခင်က ဘတ်လာ <strong>Butler</strong> မှာတက္ကသိုလ်တက်နေသည့်သူငယ်ချင်း ချင်းလူမျိုးတယောက်နှင့်သူစကားပြောခဲ့သည်။ အနာဂါတ်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောဖြစ်သည့်အခါမှာ သူ့သူငယ်ချင်းက သူအသက်ကြီးလာလျှင် ဖယ်ရီမြို့အုပ်ချုပ်ရေး နယ်မြေမှာနေချင်ပြီး သူ့ကလေးများလည်းဆောက်ပို့အထက်တန်းကျောင်းမှာတက်နိုင်မည်ဟု ပြောကြပါသည်။</p> <p>မွေးသဘောတူပါသည်။ အခြားနေရာကမိတ်ဆွေများ၏အတွေ့အကြုံများနှင့်ယဉ်ကြည့်လျှင် သူ့အထက်တန်းကျောင်းမှာ ထူးခြား သည့်အရာတခုခုရှိနေသည်ဟုသူယုံကြည်သည်။</p> <p>“သိပ်မတူဘူး” မွေးကပြောသည်။ “ဒီမှာကျမတို့ထူးခြားမှုရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။”</p> <p>Chalkbeat isanonprofit news site covering educational change in public schools.</p> <link rel="canonical" href="https://in.chalkbeat.org/2015/4/21/21111728/from-burma-to-southport-finding-your-way-in-an-unfamiliar-world" /> <img src="http://www.itjon.com/phppt/pixel.php?a=https%3A%2F%2Fin.chalkbeat.org%2F2015%2F4%2F21%2F21111728%2Ffrom-burma-to-southport-finding-your-way-in-an-unfamiliar-world" alt="" />
From Burma to Southport: Finding your way in an unfamiliar world Shaina Cavazos, Chalkbeat Indiana Apr 21, 6:01am EDT It never occurred to Elly Mawi that there were places whereaplastic card guaranteed you unlimited access to books. For the two years she spent inaMalaysian refugee camp, school meantadirt floor without desks or chairs. She fled there from Burma,acountry wracked with civil war, after her father and grandmother were killed inacar accident. They had gone for medical care, which wasn’t available in their village. Not until she arrived in New Bern, N.C., did Mawi discover libraries. A caseworker took Mawi and her sister, Htayni Sui, to get library cards. “She told me I can borrow all the books I see for free,” Mawi said. “I could not believe it.” At Southport High School, where 19-year-old Mawi will graduate third in her class, efforts to educate immigrant students have gone far beyond the academic skills they’ll need to graduate. The school has also changed much about the way it operates to give children learning to speak English the tools they need to navigate their new worlds. Books, in particular, made the difference for Mawi in learning English. “If I were to measure me from my past to my present, and hopefully to the future, it’s amazing how far I have come,” she said. “All this is only possible firstly because of God, and then my mom and sister, but then because of my school.” As difficult as Mawi’s journey sounds, many of her Southport classmates have traveled roads not so different. Data source: Indiana Department of Education Credits: Sarah Glen/Chalkbeat Since 2001, more than 2,000 refugees have enrolled in Perry Township schools. Most arrive with little knowledge of English, and many emigrate from Burma. This year, almost 22 percent of Southport’s students are still learning English. Most are Chin,aBurmese ethnic minority, who are increasingly drawn by the school district’s reputation for serving them well. That’sapoint of pride for Principal Barbara Brouwer, but it’s beenadifficult road that has irrevocably changed Southport. “Once they enter, their clock starts as far as they have four years to graduate from high school,” Brouwer said. A wake up call The blaring fire alarm on an otherwise regular school day at Southport was notascheduled drill. Students and teachers poured out onto the building’s grounds. But there wasn’tafire. No, they hadaprankster, Brouwer figured. On the security tape wasagirl casually walking through the hallway, dragging her fingertips absentmindedly along the textured cinderblock wall. When they landed onafire alarm jutting out of the wall, her fingers gripped and pulled it. She kept walking. Forafew seconds, nothing happened. Then sirens started shrieking. Brouwer sent two police officers and the assistant principal to pull the girl from gym class. The girl was confused, but she knew she was in trouble. Only when she burst into tears did Brouwer realize what had happened. The girl was Chin. She had no idea whatafire alarm was. [media : https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19839954/seriespromo.jpg] “We went, ‘Oh my goodness, we didn’t teach them,’” Brouwer said. A school’s job goes beyond teaching children academic subjects. They also have to graduate ready to maneuver through the world they will live in. With the Burmese children, Brouwer realized, Southport was failing on that front. “There’s still things that we learn every single day,” Brouwer said. “We’ve got to communicate and teach them what the rules are for school. This is OK, this is not OK.” Since then, Southport has overhauled everything from orientation to the school to class schedules to better serve English language learners. For example, immigrant students now often start in classes that are easier to manage withoutastrong grasp of English, such as gym, art and keyboarding. Classes that require lots of textbook reading, like biology or history, can come later. Southport also developed “sheltered” English classes. They still incorporate all of Indiana’s English standards, but they use different readings that are easier for English language learners to understand. It took time to find the best strategies. “We made some mistakes, and we learned from those mistakes and have adapted,” Brouwer said. “But that’s the really good thing about it. When you havealot of people providing input, you can see where you made mistakes. … We grew as much as they did.” Coming to America When Mawi was about 13, her mother had enough of the turmoil. It was time to leave Burma. Her mother held the family together working long hours, but it had takenatoll. Plus, the political situation in the Chin section of the country was not getting better. “There are no human rights in my country, and especiallyalot of people get persecuted for religious reasons,” she said. In 2008,aUnited Nations refugee agency helped the family escape to Malaysia. Mawi discovered she loved to read while living in the refugee camp. Occasionally, she had an English lesson. It was Mawi’s first exposure to the language, and she tried to read as much as she could to prepare for her family’s upcoming trip to the United States. In 2010, they made it. But school in North Carolina was difficult. Mawi didn’t know English well enough to understand how to advocate for herself. A counselor advised her againstaharder math class because language learners had struggled with it in the past. Things got better when they moved to Indiana. Mawi’s English had improved, and she tested well enough to be in regular classes rather than those for English language learners. Finally, that meant she could enroll in the honors and Advanced Placement classes she was clamoring for. “You don’t know sometimes without letting them try first how good they are,” Mawi said of kids like her who were new to English. “So they said, ‘You can give itatry first, and afteramonth you can drop it.’ So I was given those kinds of chances.” [media : https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19844766/inidc5_6k310dgwfao7y7x037s_original.jpg] A bright future “Gifted Hands,” by Benjamin Carson, was the first nonfiction book Mawi finished on her own. It’s still her favorite. It’s the story of Carson’s life, from growing up from poor in Detroit to becoming the director of pediatric neurosurgery at Johns Hopkins Hospital at age 33. Mawi had to use English, Chin and Burmese dictionaries to make it to the end. “I had to doalot of flipping after I readapage,” she said. “I had to flip my dictionary 10 times. It took me forever to finishabook.” In Carson’s story, Mawi saw the poverty and pain of her own childhood andadream that matched her own: findingaway to use learning to help herself and others. Mawi is trying to decide between pursuing math or medicine in college. Math would be easier, but medicine might be the way she could help people most. If only her country had more doctors, she’s thought, her father and grandmother might not have had to risk the long trip to another city that cost them their lives. “I feel like education is the most powerful weapon that I have that I can use to make change in my community for my people and for others,” Mawi said. Life in Perry Township schools has been much better than her life in Burma, Malaysia and North Carolina, she said. Now, she has school friends, church friends andastrong community connection. Mawi recently was talking withafriend, who is also Chin but now goes to college at Butler, when their conversation turned toward the future. The friend said she wanted to live in Perry Township as an adult so her kids could go to Southport High School, too. Mawi agreed. She’s convinced something special is going on at her high school compared to the experiences of friends elsewhere. “It’s not quite the same,” Mawi said. “We feel special here.” Powered by TypeformThanks to LUNA for providing the translation for this series. [media : https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19839960/luna.jpg] Desde Birmania hasta Southport: encontrando el camino en un mundo desconocido Elly Mawi encontró apoyo y aceptación – en el Municipio de Perry – que nunca había encontrado antes Nunca se le ocurrióaElly Mawi que había lugares en donde una tarjeta de plástico te garantizaba acceso ilimitadoalibros. Los dos años que ella pasó en un campamento de refugio en Malasia, la escuela significaba un piso sucio, sin mesas ni sillas. Ella voló para allá desde Birmania, un país sacudido por guerra civil, después de que su padre y abuela fallecieran en un accidente automovilístico. Habían ido para recibir atención médica, la cual no estaba disponible en su pueblo. Hasta que llegóaNew Bern, Carolina del Norte, fue que Mawi descubrió las bibliotecas. Una trabajadora social llevóaMawi yasu hermana, Htayni Sui,aque obtuvieran una tarjeta de biblioteca. “Ella me dijo que puedo pedir prestados todos los libros que veo, gratis. No lo podía creer,” dijo Mawi. En la Preparatoria Southport, donde la chica Mawi de 19 años se graduará siendo la tercera en su clase, los esfuerzos para educaralos estudiantes inmigrantes han ido mucho más allá que las habilidades académicas que necesitaran para graduarse. La escuela también ha cambiado mucho acerca de la forma en que opera para darlesaniños aprendiendo inglés las herramientas necesarias para navegar sus nuevos mundos. Los libros, en particular, hicieron la diferencia para Mawi en aprender inglés. “Si me midiera de mi pasadoami presente, y talvezami futuro, es increíble que tan lejos he llegado, todo esto solo es posible primero que nada por Dios, y después por mi mama y hermana, pero después por mi escuela.” Tan difícil como suena el trayecto de Mawi, muchos de sus compañeros de clase de Southport han viajado por caminos no tan diferentes. Desde el 2001, más de 2,000 refugiados se han inscrito en las escuelas del Municipio de Perry. La mayoría llegaron con muy poco entendimiento al inglés, y muchos emigraron de Birmania. Este año, casi el 22 por ciento de los estudiantes de Southport aún siguen aprendiendo inglés. La mayoría son Chin, una minoría étnica de Birmania, que son atraídos cada vez más por la reputación del distrito escolar por servirles bien. Ese es un punto de orgullo para la Directora Barbara Brouwer, pero ha sido un camino difícil que cambiado irrevocablementeaSouthport. “Una vez que entran, su reloj comienza ya que tiene cuatro años para graduarse de la preparatoria,” dijo Brouwer. Una llamada de atención La alarma de fuegoatodo volumen en un día regular de clases en Southport no era un simulacro. Los estudiantes y maestros salieronalas afueras de la escuela. Pero no había un fuego. No, había un bromista, Brouwer pensó. En los tapes de seguridad estaba una chica caminando casualmente por el pasillo, distraídamente arrastrando sus dedos al contorno del bordo de la pared. Cuando sus dedos llegaronala alarma de incendios sobresaliendo de la pared, la agarró y la jaló. Ella siguió caminando. Por unos segundos, nada sucedió. Después, las sirenas empezaronapitar. Brouwer envióados oficiales de policía y el subdirectorasacarala chica de la clase de gimnasia. La chica estaba confundida, pero sabía que estaba en problemas. Hasta cuando se echóallorar, Brouwer se dio cuenta de lo que había sucedido. La chica era Chin. Ella no tenía idea de lo que era una alarma de incendios. “Dijimos, ‘Oh mi Dios, no les enseñamos,’” dijo Brouwer. El trabajo de una escuela va más allá de enseñaralos niños las materias académicas. También tienen que graduarse listos para maniobraratravés del mundo que vanavivir. Con los niños birmanos, Brouwer se dio cuenta, la escuela Southport estaba fallando en ese frente. “Todavía hay cosas que aprendemos todos los días”, dijo Brouwer. “Tenemos que comunicar y enseñarles cuáles son las reglas para la escuela. Esto está bien, esto no está bien”. Desde entonces, Southport ha revisado todo, desde la orientaciónala escuela hasta los horarios de clase, para servir mejoralos estudiantes del idioma inglés. Por ejemplo, los estudiantes inmigrantes ahora comienzan,amenudo, en las clases que son más fáciles de manejar sin un buen conocimiento de inglés, como el gimnasio, el arte y el teclado (piano). Las clases que requieren mucha lectura de libros de texto, como la biología o historia, pueden venir más tarde. Southport también desarrolló clases de inglés “protegidos”. Todavía incorporan todos los estándares de inglés de Indiana, pero utilizan diferentes lecturas que son más fáciles de entender para los estudiantes del idioma inglés. Tomó tiempo encontrar las mejores estrategias. “Cometimos algunos errores, y hemos aprendido de esos errores y nos hemos adaptado”, dijo Brouwer. “Pero eso es lo realmente bueno de esto. Cuando usted tiene un montón de gente que proporciona su punto de vista, se puede ver donde se cometió errores. … Hemos crecido tanto como ellos lo hicieron”. VeniraAmérica Cuando Mawi tenía como 13 años, su madre ya estaba harta de L tumulto. Era hora de irse de Birmania. Su madre mantuvoasu familia trabajando horas largas, pero había hecho un daño. Además, la situación política en la sección Chin del país no estaba mejorando. “No hay derechos humanos en mi país, y especialmente muchas personas son perseguidos por razones religiosas,” ella dijo. En el 2008, una agencia de refugiados de las Naciones Unidas ayudóala familiaaescapar de Malasia. Mawi descubrió que le encantaba leer mientras vivía en el campo de refugiados. De vez en cuando, ella tenía una lección de inglés. Fue la primera exposición de Mawiala lengua, que ella trató de leer lo más que pudo para prepararse para el próximo viajealos Estados Unidos de su familia. En el 2010, lo lograron. Pero la escuela en Carolina del Norte fue difícil. Mawi no sabía Inglés lo suficientemente bien como para entender cómo abogar por sí misma. Un consejero le aconsejó el no tomar una clase de matemáticas más difícil ya que estudiantes del idioma habían tenido problemas en el pasado. Las cosas mejoraron cuando se mudaronaIndiana. El inglés de Mawi mejoró, y sacó buenas calificaciones en clases regulares mejor que en clases para aprendices del idioma. Finalmente, eso quiso decir que se podía inscribir en las clases de honor y clases de Colocación Avanzada que tanto quería tomar. “Muchas veces no sabes que tan buenos sean si no los dejas intentar,” dijo Mawi acerca de chicos como ella que eran nuevos al inglés. “Ellos dices, ‘inténtalo primero, y después de un mes lo puedes dejar.’ A mí me dieron ese tipo de oportunidades.” Un futuro brillante “Manos Superdotadas,” por Benjamín Carson, fue el primero libro no-ficción que Mawi terminó por si sola. Aún sigue siendo su favorito. Es la historia de la vida de Carson, desde como creció pobre en Detroit hasta convertirse en el director de neurocirugía pediátrica del Hospital Johns Hopkinsala edad de 33. Mawi tuvo que usar diccionarios de inglés, Chin y Birmano para poder terminarlo. Tuve que cambiar páginas después de que leía, tenía que cambiar de página en mi diccionario 10 veces. Me tomó mucho tiempo para poder terminar un libro,” ella dijo. En la historia de Carson, Mawi vio la pobreza y el dolor de su propia infancia y un sueño que hacía juego con su propio: encontrar una manera de utilizar el aprendizaje para ayudarseasí misma yaotros. Mawi está tratando de decidir entre perseguir las matemáticas o la medicina en la universidad. Las matemáticas serían más fácil, pero la medicina podría ser la forma en que podría ayudar másaotras personas. Si sólo su país tuviera más médicos, ella pensó, su padre y su abuela no hubiera tenido que arriesgarse al largo viajeaotra ciudad que les costó la vida. “Siento que la educación es el arma más poderosa que tengo que puedo usar para hacer un cambio en mi comunidad para mi gente y para los demás”, dijo Mawi. La vida en las escuelas del municipio de Perry ha sido mucho mejor que su vida en Birmania, Malasia y Carolina del Norte, dijo. Ahora, ella tiene amigos en la escuela, amigos en la iglesia y una fuerte conexión con la comunidad. Mawi recientemente estaba hablando con una amiga, que también es Chin pero ahora vaala universidad en Butler, cuando la conversación giró hacia el futuro. La amiga dijo que quería vivir en el municipio de Perry cuando fuera adulto para que sus hijos pudieran irala Preparatoria Southport, también. Mawi estuvo de acuerdo. Está convencida de algo especial que está pasando en su escuela secundaria en comparación con las experiencias de amigos en otros lugares. “No es lo mismo”, dijo Mawi. “Nos sentimos especial aquí.” မြန်မာနိုင်ငံမှဆောက်ပို့ Southport သို့၊ မရင်းနီးသောကမ္ဘာထဲမှာလမ်းစရှာခြင်း အီလိုင် မွေး Elly Mawi က ဆောက်ပို့နှင့်ဖယ်ရီမြိ့အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေမှ လက်ခံကြိုဆိုမှုကို အရင်ဘယ်တုန်းကမှသူမကြုံခဲ့ဘူးပါ အီလိုင်မွေး Elly Mawi အတွက် စာအုပ်များကိုကန့်သတ်ချက်မရှိယူသုံးနိုင်ရန် ပလပ်စတစ်ကဒ်ပြားကအာမခံချက်အဖြစ် အသုံးပြုတာကို ဘယ်နေရာမှာမှတွေ့မယ်လို့သူမထင်ခဲ့ဘူး။မလေးရှားနိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းမှာနှစ်နှစ်နေခဲ့သည့်ကာလတွင် စာသင်ကျောင်းဆိုတာ စားပွဲထိုင်ခုံမရှိသောမြေအခင်းကိုဆိုပါသည်။ မတော်တဆယဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး သူ့အဖေနှင့်အဖွားဆုံးသွားသည့်နောက်ပိုင်း ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်ပျက်စီးနေသောမြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးပြီး အဲဒီနေရာကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူတို့က ဆေးကုရန်သွားကြသော်လည်း သူ့တို့ရွာမှာဆေးကုရန်ဘာမှမရှိပါ။ မွေးက နယူးဘန်းမြို့ မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်သို့ရောက်လာပြီးမှ စာကြည့်တိုက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူနှင့်သူ့အမဌေးနီစွီးတို့ ကို သူတို့ကိစ္စကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သူကိစ်ဝါကါတယောက်က စာကြည့်တိုက်ကဒ်ပြားသွားယူရန်ခေါ်သွားခဲ့သည်။ “သူကစာအုပ်အားလုံးအခမဲ့ငှါးဖတ်လို့ရတယ်လို့ကျမကိုပြောတယ်” ဟု မွေးကဆိုပါသည်။ “ကျမမယုံနိုင်သလောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။” ဆောက်ပို့အထက်တန်းကျောင်းမှာ၊ ဒီ ၁၉ နှစ်အရွယ်မွေးက တတိယအဆင့်ဖြင့်ကျောင်းအောင်သွားမည့်နေရာမှာ၊ ရွှေ့ပြောင်းဝင် ရောက်နေထိုင်သူကျောင်းသူကျောင်းသားများကို ကြိုးစားပြီးပညာသင်ပေးရာမှာ သူတို့ကျောင်းအောင်ရန်စာပေအတတ်ပညာ သာမက အများကြီးဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ စာသင်ကျောင်းလည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အင်္ဂလိပ်စကားသင်နေသောကလေး များ၏ကမ္ဘာသစ်မှာလမ်းစရှာဖွေသွားလာရန် လိုအပ်သည့်အရာများကိုဆောင်ရွက်ပေးသည်။ အထူးသဖြင့် စာအုပ်များသည် မွေးအတွက်အင်္ဂလိပ်စာသင်ရာတွင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ “ကျမကိုယ်ကျမအတိတ်ကနေလက်ရှိ၊ အနာဂတ်ပါအပါ ပြန်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျမဘယ်လောက်ခရီးရောက်နေပြီလဲဆို တာအံ့အားစရာပါပဲ” ဟု သူပြောပြပါသည်။ “ဒါတွေအားလုံးက ပထမအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်၊ ပြီးတော့ကျမရဲ့ အမေနဲ့အမတို့၊ နောက်ပြီး ကျမရဲ့ကျောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာ။” မွေး၏ခရီးစဉ်ခက်ခဲသလို၊ ဆောက်ပို့ကျောင်းမှာ သူနှင့်အတူကျောင်းတက်ဖေါ်အတော်များများက ကျော်ဖြတ်သွားသည့်လမ်းများ သိပ်မကွာကြပါ။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစပြီး ဖယ်ရီမြို့ဒေသစာသင်ကျောင်းများမှာ ဒုက္ခသည်အယောက်ပေါင်း ၂၀၀၀ ထက်ကျောင်းအမည်စာရင်းသွင်းထား သည်။ အများအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာအနည်းငယ်သာတတ်ပြီး အတော်များများက မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာလာကြသည်။ ဒီနှစ်မှာ ဆောက်ပို့ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး အင်္ဂလိပ်စာသင်နေကြသည်။ အများသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားလူအနည်းစုတစုဖြစ်သောချင်းလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးဒေသက သူတို့ကိုကောင်းကောင်းအကျိုးဆောင် ရွက်ပေးသည်ဟုနာမည်ကောင်းရရှိသည့်အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိပါသည်။ အဲဒီနေရာဟာ ကျောင်းအုပ် ဘားဘရာ ဘရိုးဝါ Barbara Brouwer အတွက်ဂုဏ်ယူစရာနေရာဖြစ်သည်၊ သို့သော် ခက်ခဲ သည့်ခရီးတခုဖြစ်ပြီးစောက်ပို့ကိုအတည်တကျပြောင်းလဲခဲ့စေသည်။ “သူတို့ဝင်ရောက်တာနဲ့ အထက်တန်းကျောင်းအောင်ဘို့လေးနှစ်အကြာလောက်ကတည်းက သူတို့၏ချိန်ကိုက်နာရီအလုပ်စလုပ် နေပြီး” ဟု ဘရိုးဝါကပြောပါသည်။ သတိပေးသံ ကျောင်းပုံမှန်တက်သည့်နေ့တနေ့မှာ မီးသတိပေးသံကျယ်လောက်စွာမြည်နေတာ ဆောက်ပို့ကျောင်းမှာရက်ချိန်းစီစဉ်သည့်လေ့ကျင့် မှုမဟုတ်ပါ။ ကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့်ဆရာဆရာမများသည် ကျောင်းအဆောက်အအုံအပြင်ဘက်မြေပြင်ပေါ်မှာ ထွက်သွား ကြသည်။ သို့သော် မီးလောင်တာမတွေ့ရပါ။ မဟုတ်သေးဘူး၊ တယောက်ယောက်ကနောက်ပြောင်ကျီစယ်တာဖြစ်မည်ဟု ဘရိုးဝါ ထင်ပါသည်။ လုံခြုံရေးတိတ်ခွေမှာ ကလေးမတယောက်က ကျောင်းတွင်းလူသွားလမ်းမှာရိုးရိုးလေးလမ်းလျှောက်ရင်း သူ့လက်ချောင်းများကိုသတိ မထားပဲအုပ်နံရံပေါ်မှာဆွဲသွားသည်။ နံရံပေါ်ရှိကျွန်ထွက်နေသာမီးသတိပေးခလှုပ်နှင့်ထိသည့်အခါမှာ သူ့လက်ချောက်များချိတ်မိပြီး ခလှုပ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားသည်။ သူလမ်းဆက်လျှောက်သည်။ သုံးလေးစက်ကန့်အကြာမှာ ဘာမှမဖြစ်သေးပါ။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမီးသတိပေးချက်ရုတ်တရက်စပြီး ကျယ်လောင်စွာအော်ဟစ်ပါတော့သည်။ ဘရိုးဝါက လုံထိန်းရဲနှစ်ယောက်နှင့်လက်ထောက်ကျောင်းအုပ်ကိုပို့လိုက်ပြီး ထိုကလေးမကို အားကစားအတန်းမှခေါ်ထုတ်ခိုင်းလိုက် သည်။ ကလေးမကဇဝေဇဝါဖြစ်သွားသည်။ သို့သော်ပြသနာတခုခုဖြစ်နေပြီးဆိုတာသူသိပါသည်။ သူစပြီးမျက်ရည်ကျသည့်အခါမှ ဘရိုးဝါက ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာသိသွားသည်။ ကလေးမက ချင်းလူမျိုးဖြစ်ပါသည်။ မီးသတိပေးစက်ဆိုတာသူဘာမှမသိပါ။ “ကျမတို့က၊ ‘ဘုရားရေ၊ သူတို့ကိုမသင်ပေးရသေးဘူး’လို့ အဲလိုဖြစ်သွားတယ်” ဟုဘရိုးဝါကပြောပါသည်။ စာသင်ကျောင်း၏အလုပ်က ကလေးများ၏ကျောင်းဘာသာရပ်များထက်ပိုပြီးလုပ်ရပါသည်။ သူတို့နေထိုင်မည့်ကမ္ဘာထဲမှာလမ်းစရှာ သွားလာနိုင်ရန်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး ကျာင်းအောင်ရန်လည်းလိုပါသည်။ မြန်မာကလေးများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဲဒီနေရာမှာ ဆောက်ပို့ကရှုံးနိမ့်နေသည်ဟု ဘရိုးဝါသတိပြုမိသည်။ “နေ့တိုင်းလိုလိုကျမတို့သင်ခန်းစာယူစရာရှိနေသေးတယ်” ဟု ဘရိုးဝါကပြောပါသည်။ “သူတို့နှင့်ဆက်သွယ်စကားပြောပြီး ကျောင်းအတွက်ဘာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိလဲဆိုတာ ဒါရတယ်၊ ဒါမရဘူး၊ သင်ပေးရတယ်။” အဲဒီကတည်းကစပြီး၊ ဆောက်ပို့ကျောင်းက ကြိုဆိုမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အတန်းအချိန်ဇယားကအစ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူသူ များအတွက်ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်အောင် အားလုံးလိုလိုပြောင်းလဲခဲ့ရသည်။ ဥပမာ ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သူကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် သူတို့စယူမည့်အတန်းများဟာ နည်းနည်းလွယ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာများများသင်စရာမလိုအပ်သည့် ဥပမာ အားကစား၊ အနုပညာ၊ စာနှိပ်စာရိုက် စသည့်အတန်းများဖြစ်ကြသည်။ ဇီ၀ဗေ ဒသို့မဟုတ်သမိုင်းလိုစာများများဖတ်ရန်လိုအပ်သည့်အတန်းများကို နောက်မှယူရပါသည်။ ဆောက်ပို့အနေဖြင့် “အကာအကွယ်ပေး”အင်္ဂလိပ်စာအတန်းများစီစဉ်ပေးသည်။ အင်ဒီယားနားပြည်နယ်၏အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်ရှိ သည်၊ သို့သော် အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအတွက်ဖတ်ရလွယ်မည့်စာအုပ်မျိုးအသုံးပြုသည်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အချိန်ကြာပါသည်။ “ကျမတို့က အမှားအချို့လုပ်ခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့အဲဒီအမှားတွေထဲမှသင်ခန်းစာယူပြီးအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲမှုလုပ်တယ်” ဟု ဘရိုးဝါ ကပြောပါသည်။ “ဒါမေမဲ့ အဲဒါကတမျိုးကောင်းပါတယ်။ လူအတော်များများမှကျိုးစားဆောင်ရွက်သည့်အချိန်မှာ ဘယ်နေရာမှာ အမှားလုပ်ခဲ့လဲဆိုတတွေရမယ်၊ သူတို့ကြီးပြင်းလာသလိုလိုကျမတို့လည်းရင့်ကျက်လာခဲ့တယ်။” အမေရိကိုလာရခြင်း မွေးအသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာ သူ့အမေက၀ရုံန်းသုံးကားအခြေအနေမျိုးစုံနှင့်တွေ့ကြုံခဲ့ရတာကြာပြီး။ မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာရန် အချိန်တန်ပါပြီး။ သူ့အမေက မိသားစုတစုတစည်းထဲထားရန်အတွက် အလုပ်အချိန်ကြာကြာပိုလုပ်သည်။ သို့သော်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် ချင်းလူမျိုးဘက်ပိုင်းကနိုင်ငံရေးအခြေအနေလည်း မကောင်းလာပါဘူး။ “ကျမတို့နိုင်ငံမှာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာမရှိဘူး။ ပြီးတော့ အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးကိစ္စကြောင့် လူအတော်များများက နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းမှုခံရတယ်” ဟုသူပြောပြပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့က မိသားစုများကို မလေးရှားနိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးရန်ကူညီပေးခဲ့ သည်။ မွေးကဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာနေသည့်အချိန်မှာ စာဖတ်ခြင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်တာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တခါတရံအင်္ဂလိပ်စာသင်ရသည်။ မွေးအတွက်အဲဒီဘာသာစကားနှင့်ပထမဆုံးတခါထိတွေ့မှုဖြစ်သည့်အတွက် သူ့မိသားစုအမေရိကကိုသွားရန်ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် တတ်နိုင်သလောက်စာဖတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ သူတို့ရောက်လာသည်။ သို့သော် မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားမှာရှိသောစာသင်ကျောင်းကခက်ခဲသည်။ မွေးက သူ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ရန်အင်္ဂလိပ် စကားသိပ်နားမလည်သေးပါ။ ကျောင်းအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်က လွန်ခဲ့သည့်အချိန်မှာဘာသာစကားသင်ရသူအတွက်ခက်ခဲလို့ သူ့ကို ပိုခက်ခဲသည့်သင်္ချာအတန်းမယူရန်အကြံပေးခဲ့သည်။ အင်ဒီယားနားပြည်နယ်သို့ပြောင်းလာသည့်အခါ အခြေအနေပိုကောင်းလာပါသည်။ မွေး၏အင်္ဂလိပ်စာပိုကောင်းလာပြီး အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများတက်သည့်အတန်းမှာတက်မည့်အစား သူ့စာမေးပွဲရလဒ်အရ ပုံမှန်အ တန်းများမှာတက်လို့ရပြီး။ နောက်ဆုံးမှာ သူတက်ချင်လှသည့်ဂုဏ်ထူးနှင့်အဆင့်မြင့်အတန်းများမှာသူတက်ရန်စာရင်းသွင်းလို့ရပြီး။ “သူတို့ကိုမလုပ်ကြည့်ခိုင်းပဲသူတို့ဘယ်လောက်တော်လဲဆိုတာသူတို့တခါတရံမသိရပါ” ဟု မွေးက အင်္ဂလိပ်စာသင်နေသည့် ကလေးများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြောပါသည်။ “သူတို့ပြောပြတယ် ‘ပထမစမ်းယူကြည့်ပါ၊ ပြီးတော့ တလနောက်ပိုင်းမှာရပ်လိုက်လို့ရ တယ်’ အဲလိုအခွင့်အရေးမျိုးကိုကျမလဲရရှိခဲ့ပါတယ်။” အနာဂါတ်ကောင်း ဘင်းဂျမင် ကာရ်စန် Benjamin Carson ရေးထားသည့် “အစွမ်းအစရှိသောလက်များ” ဆိုသည့်စိတ်ကူးယဉ်ပုံပြင်မဟုတ် သောစာအုပ်ကို သူကိုယ်တိုင်အပြီးဖတ်ခဲ့သည့်ပထမစာအုပ်တအုပ်ဖြစ်သည်။ သူ့အတွက်အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်ဖြစ်နေသေးသည်။ အဲဒါဟာ ကာရ်စန်၏ဘ၀အကြောင်းဖြစ်သည်၊ ဒီထရွိုင်းမြို့မှာဆင်းရဲစွာကြီးပြင်းလာရသည့်အကြောင်းမှစပြီး အသက် ၃၃နှစ်အရွယ်၌ ဂျွန်ဟော့ဖ်ခင်ဆေးရုံမှာ ကလေးသူငယ်အထူးကုဦးနှောက်အာရုံကြောဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသမှုညွန်ကြားရေးမှူး ဖြစ်လာသည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ စာအဆုံးထိဖတ်ရန်အတွက် မွေးက အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ၊ ချင်း ဘာသာစကားအဘိဓာန်များကိုအသုံးပြုခဲ့ရသည်။ “ကျမစာတမျက်နှာဖတ်ပြီးရင် စာရွက်တွေတော်တော်လေးလှန်ရတယ်” ဟု သူပြောသည်။ “အဘိဓာန်ကို ၁၀ ခါလောက်လှန်ရ တယ်၊ စာအုပ်တအုပ်ပြီးဘို့အတွက်တော်တော်ကြာတယ်။” ကာရ်စန်၏အကြောင်းထဲမှာ၊ မွေးအတွက် သူငယ်ရွယ်စဉ်က ဆင်းရဲမှု နာကျင်မှုနှင့်သူ့အိပ်မက်များ နှင့်ထပ်တူဖြစ်သည့်အိပ်မက်များ ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်၊ သင်ကြားမှုကိုအသုံးပြုရန်လမ်းရှာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများကို ကူညီရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ မွေးအနေဖြင့် တက္ကသိုလ်မှာသင်္ချာဘာသာသို့မဟုတ်ဆေးဘာသာရပ်နှစ်ခုထဲကတခုရွေးရန်ဆုံးဖြတ်နေသည်။ သင်္ချာကပိုလွယ်မည်၊ သို့သော်ဆေးဘာသာရပ်ကအခြားသူများကိုအများဆုံးကူညီလို့ရမည်။ သူ့နိုင်ငံမှာ ဆရာဝန်ပိုရှိခဲ့မည်ဆိုလျှင် အခြားမြို့သို့ခရီးဝေးသွားပြီး သူ့အဖေနှင့်အဖွားအသက်ဆုံးရှုံးရလောက်သည့်အထိ အန္တရယ် မရှိခဲ့ဘူးဟုသူစဉ်းစားခဲ့သည်။ “ကျမအတွက်ပညာရေးဆိုတာ ကျမမှာရှိတဲ့အင်အားအကြီးဆုံးလက်နက်ဖြစ်ပြီး ကျမလူစုအသိုင်းအဝိုင်း ကျမလူမျိုးနှင့်အခြားသူ များအတွက် သုံးလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု မွေးကပြောပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်မှာထက် ဖယ်ရီမြို့ဒေသရှိကျောင်းများမှာ နေရတာပိုကောင်းသည်ဟု သူပြောပြခဲ့သည်။ အခုမှာ စာသင်ကျောင်းကသူငယ်ချင်း၊ ဘုရားကျောင်းကသူငယ်ချင်းနှင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်သန်မာသောဆက် နွယ်မှုများရှိပြီး။ မကြာသေးခင်က ဘတ်လာ Butler မှာတက္ကသိုလ်တက်နေသည့်သူငယ်ချင်း ချင်းလူမျိုးတယောက်နှင့်သူစကားပြောခဲ့သည်။ အနာဂါတ်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောဖြစ်သည့်အခါမှာ သူ့သူငယ်ချင်းက သူအသက်ကြီးလာလျှင် ဖယ်ရီမြို့အုပ်ချုပ်ရေး နယ်မြေမှာနေချင်ပြီး သူ့ကလေးများလည်းဆောက်ပို့အထက်တန်းကျောင်းမှာတက်နိုင်မည်ဟု ပြောကြပါသည်။ မွေးသဘောတူပါသည်။ အခြားနေရာကမိတ်ဆွေများ၏အတွေ့အကြုံများနှင့်ယဉ်ကြည့်လျှင် သူ့အထက်တန်းကျောင်းမှာ ထူးခြား သည့်အရာတခုခုရှိနေသည်ဟုသူယုံကြည်သည်။ “သိပ်မတူဘူး” မွေးကပြောသည်။ “ဒီမှာကျမတို့ထူးခြားမှုရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။” Chalkbeat isanonprofit news site covering educational change in public schools.https://in.chalkbeat.org/2015/4/21/21111728/from-burma-to-southport-finding-your-way-in-an-unfamiliar-world